Kalfadhigii 1aad ee Barlamaanka oo maanta la sogootinaayo iyo Barlamaan ka oo gali doona fasax 2 bil ah – idalenews.com
Kalfadhigii 1aad ee Barlamaanka oo maanta la sogootinaayo iyo Barlamaan ka oo gali doona fasax 2 bil ah
Kulanka ay maanta yeelanayaan xubnaha barlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la sheegey in lagu soo xiro doono kalfadhigii kowaad ee barlamaanka ee soo bilowda 20 August ee sanadkii tagey ee 2012. Waxaana xildhibaanada ay gali doonaan fasax dheer oo qaadan doona laba bil.
Xildhibaan Caadil Sheegow oo ka mid ah guddiyada joogtada ee dhowaan baarlamaanka uu sameystay ayaa sheegay in maanta mudanayaasha ay yeelan doonaan kulan lagu soo afmeeraayo dhammaan hawlihii baarlamaanka u socday isla markaana ay kala qaadan doonaan warbixin la xiriirta shaqooyinkii u qabsoomay baarlamaanka mudadii uu shaqeynayey.
Xildhibaan Caadi ayaa sheegay in 45 fadhi oo uu ka koobnaa kalfadhiga koowaad maanta lagu soo gabagabeyn doono hoolka shirarka ee aqalka golaha shacabka Muqdishp, kadibna guddoonka baarlamaanka ku dhawaaqi doono fasaxa mudanayaasha ay galayaan oo berito u bilaaban doona.
Gudoomiyaasha 15 guddi ee ee baarlamaanka uu leeyahay iyo guddoonka baarlamaanka ayaa lagu wadaa inaysan fasax gelin oo ay sii joogaan Muqdisho, maadaama guddiyada joogta ay la shaqeynayaan xukuumadda qeybaheeda kala duwan.
Inkastoo guddoonku uu maanta ku dhawaaqayo rasmi ahaan in xildhibaanada ay fasax aadayaan ayaa hadda waxaa horey fadhiyada baarlamaanka uga maqnaa ku dhowaad 100 xildhibaan oo intooda badan aan joogin dalka gudihiisa kuwaasoo qaarkood fasax qaateen qaarna ay iskood u maqnaayeen.
Barlamaanka Soomaaliya ayaa mudadii uu jirey yeeshey ilaa iyo 45 kulan oo caadi ah iyo 8 kulan oo aan caadi aheyn, waxaana howlaha ay qabteen ugu muhiimsanaa doorashada Madaxweyne, ansixinta Ra’iisul Wasaaraha, Ansixinta Golaha Wasiirada Xukuumada Saacid iyo Ansixinta Miisaaniyada.
Idale News Muqdish
Dowlada Somalia iyo Alshabaab oo mid kastaa guulo ka sheegtay dagaalka Gobolka Gedo
Daawo: Australia oo amar ku bixisey in la laayo 1/3 geela duurjoota ah, iyo Somalia oo Geelu ka yahay Lafdharbarka Nolosha